#sastisfied - Instagram photos and videos | WEBSTAGRAM
💜Follow @slimeyguleum for more!
Cheat day 当然晚上就要还债 哈哈哈 ！爽 💦 做了手臂，腹肌，屁股 🙌🏻
#homeworkout #sastisfied #sweat
Peanut butter Crunch .
#slime #Peanut #butter #peanutbutter #peanutbutterslime #bubbles #asmr #cool #sastisfied #brownslime
I kinda cut the part becuz i want you guys to see the drizzle part 🌨️
Rate ? 100000000000000/10
I really love the slime , it is super cute and drizzly❣️
#slimevideos #slime #asmr #asmrslime #review #slimereview #sastisfyingslime #sastisfied getsatisfied #cloudslime #cloud #slimeislife #slimegoals
Thank you so much @landseries.id ❣️
Note : i bought this with my own money so don't ask her to giveafree slime 🐇
Sweet heart 👼
It leave some residue but i don't really mind .I really love the smell😍 overall i really like this sweet slime🍼
-#slimevideos #slime #asmr #asmrslime #review #slimereview #sastisfyingslime #sastisfied getsatisfied #cloudslime #cloud #slimeislife #slimegoals
#Digtial ခေတ်မှာ #Branding လုပ်ဖို့ ဘာလိုအပ်သလဲ ?
ယခင်ကာလတွေတုန်းက Branding လုပ်တဲ့အခါ #customer စိတ်ထဲ မိမိတို့ အမှတ်တံဆိပ်စွဲထင်နေဖို့ ကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ Slogan တွေကို အကူညီယူပြီး အသုံးပြုကြတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် BMW က “The ultimate driving machine” , Southwest Airline က “The short-haul, no-frills, and low-priced airline” စသဖြင့် ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ အားသာချက်ကို #Slogan အဖြစ် အသုံးချပြီး #Position လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ Digital ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါ Branding လုပ်ခြင်းတွေ ပုံစံတွေ ပြောင်းလာတယ်။ Slogan လုပ်ရုံနဲ့ မိတ်ဆွေတို့ထုတ်ကုန်ကို အသိအမှတ်မပြုကြလာတော့ဘူး။ ကြော်ငြာတွေပေး၊ #Free ပေးရုံနဲ့ အမြဲတမ်းဝယ်သုံးချင်မှ သုံးတော့မယ်။ ရပ်ကွက်ထဲက Salon ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုပါတော့။ အခုမှအသစ်ဖွင့်တော့ ဖွင့်ပွဲအနေနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ Free ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ပစည်းအညံ့စားတွေသုံး ၊ ၀န်ဆောင်မှုညံ့တဲ့အခါ ဘယ်သူမှ စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။ Digital ခေတ်မှာ Digital အကူညီကိုယူပြီး Branding လုပ်နိုင်ရမယ်။ Customer တွေက ပစ္စည်းတစ်ခု မ၀ယ်ခင် #Review ဖတ်တဲ့အကျင့်၊ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုမသုံးခင် #Website မှာဖြစ်ဖြစ် ကြိုလေ့လာတဲ့ အလေ့အထ ပြောင်းလာကြတယ်။ “Value” တစ်ခုမရှိရင် မသုံးချင်တော့ဘူး။ ခုနက Salon ဥပမာနဲ့ပဲ ပြန်ဆက်ရရင် Salon ဆိုတဲ့နေရာကို အလှအပပြင်ဖို့ထက် #Relax လာလုပ်တဲ့သူဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ သိရမယ်။ စကားများတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို Customer တွေက ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ဆိုင်ရဲ့ #Value က customer တွေ စိတ်ချမ်းသာဖို့။ ဟုတ်ပြီ ကိုယ့်ရဲ့ Value ကိုသိဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ ?
Digital အကူညီယူရမယ်။ One #sastisfied customer ကနေ #Loyal Customer ဆင့်ခေါ်မယ်။ ဒီတော့ Digital ကိုသုံးပြီး Usage Brand ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ Digital ခေတ်ရဲ့ Branding သည် “Customer တွေရဲ့ Life style ကို ဘယ်လိုလွယ်ကူစေသလဲ” ဆိုတာနဲ့ လိုက်ပြီး Position လုပ်ရတာပါပဲ။ အဓိကကတော့ ကိုယ့် ထုတ်ကုန်/၀န်ဆောင်မှုကို သုံးပြီး သူတို့တွေ ဘယ်လိုအကျိုးရသွားသလဲပေါ့။
မိတ်ဆွေတို့လည်း Digital ကိုသုံးပြီး Branding ကို တည်ဆောက်ထားသင့်ပါပြီ။ Efectivee Marketing Agency
Ph: 09965084252, 09798427300, 095084252
Follow this amazing account there is so many good slimes I really recommend you!! You will be #sastisfied 😍😍😍 @tatoslimes
#craving #sastisfied #foodporn #foodbrampton #delicious #steak #yummyyummyinmytummy